The OnePlus 9 na OnePlus 9 Pro ga-agụnye chaja na igbe | Gam akporosis
Oge ọ bụla enwere mgbanwe na ọnọdụ na ụwa nke telephony, n'oge ọnwa mbụ (oge ụfọdụ ọbụlagodi afọ), ọ bụ akụkọ ma ọ bụrụ na ndị ọzọ na-emepụta ihe na-agbaso otu ụdị. Na mkpọchi nke isi okwu si na iPhone 7 na 7 Plus, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe gbasoro omume a, Samsung bụ otu n'ime ndị ikpeazụ na-eme ya.
Site na chaja chaja na igbe nke iPhone ohuru ohuru, nke a aburula ihe omuma nke otutu ndi oru chọrọ ịmata mgbe ha ga-eme ha ngwaọrụ. Samsung agbasoro otu ụzọ ahụ ngwa ngwa, mana ugbu a, ọ dị ka ọ bụ naanị ya fọdụrụ onye nrụpụta, opekata mpe ugbu a.
N'ime izu ole na ole, OnePlus na-eme atụmatụ iwebata OnePlus 9 na OnePlus 9 Pro, ọnụ nke ihe onyonyo amalitela ịgbasa na vidiyo banyere atụmatụ ya, kamakwa, kwa nke ọdịnaya nke igbe. Max Jambor, onye ama ama ama ama ama ama ama ama ama na ekwenye na ụdị ọhụụ a ga-etinye chaja n'ime igbe nke ọgbọ ọhụrụ nke usoro OnePlus 9.
Mkpebi a nwere ike ịbụ ihe abụọ kpatara ya. Nke mbu bu na OnePlus adighi ere ahia dika otutu Samsung na Apple na eme kwa afo. Ọzọkwa, o yighị ka ndị ọrụ nwee ihe nkwụnye nkwụnye ọkụ, ya mere, nke a agaghị abụ isi ihe dị iche na ndị ọzọ na-emepụta ya.
Ihe nke abuo mere bu ihe a bu: usoro ngwa ngwa OnePlus, usoro ntinye ihe ruru 65W nke ụlọ ọrụ ahụ na-anya isi ọtụtụ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ ezie na egosiri n'ọtụtụ oge na usoro nkwụ ụgwọ a na-emebi ike batrị ngwa ngwaN'ihi ya, Samsung na Apple ka anaghị etinye ya n'ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » OnePlus 9 na OnePlus 9 Pro ga-etinye chaja na igbe ahụ